दक्षिण भारतका चर्चित नायक विजयले किन दिए आफ्नै आमाबिरुद्ध प्रहरीमा उजुरी?
काठमाडौं : बाबुआमा बि’रुद्ध प्रहरीमै उ’जुरी लिएर जानु हाम्रो समाजमा अचम्म मानिन्छ । तर एक चर्चित अभिनेताले यस्तो कार्य गरेका छन् । भारतमा साउथ फिल्मका चर्चित अभिनेता थलापति विजय फेरी चर्चामा आएका छन् ।
अभिनेताले आफ्नो बाबु आमासहित ११ जनाबि’रुद्ध उ”जुरी दिएका हुन् । उ’जुरीमा विजयले ११ जना मानिसहरुलाई भेट्न नदिन समेत आग्रह गरेका छन् । उनका फ्यान फलोइंग धेरै छन् ।अंग्रेजी वेबसाइट टाइम्स अफ इन्डियाको अनुसार विजयका पिता
चन्द्रशेखरले उनको नाममा २०२० सालमा राजनीतिक पार्टी अल इन्डिया थलापति विजय मक्कलको घो’षणा गरेका थिए । अभिनेताका पिताले आफ्नो छोरा पनि चाँडै नै राजनीतिमा आउने दाबी गर्दै आएका थिए ।
तर, बिजय अब भने पिताको वि’रुद्धमा जादैछन् । यसबारेमा उनले आफ्नो भनाई पनि जारी गरेका छन् । विजयले बयानमा पिताको राजनीतिक पार्टीमा आफ्नो प्रत्यक्ष वा अ’प्रत्यक्ष कुनै पनि रुपमा स म्ब न्ध नरहेको स्पष्ट पारेका हुन् ।
उनले आफु पिताको बाध्य कारी आ’कांक्षाको पालना गर्न अब बाध्य नभएको पनि उल्लेख गरेका छन् । यदि आफ्नो फोटो कुनै राजनीतिक दल वा क्लबले प्रयोग गरेमा का’रवाही गर्ने समेत चेतावनी दिएका छन् । उनले आफ्नो फोटो र नामको दु’रुपयोग गर्नेहरुलाई रोक्नन समेत माग गरेका गरेका छन् ।
२०७८ आश्विन ५, मंगलवार प्रकाशित 1 Minute 91 Views
यी हुन् कुखुरा मा’र्न आएकाे चितुवाको गर्धन समातेर नियन्त्रणमा लिने बागलुङे ठिटो ।
भ’खरै सु’र्खेतमा ब’म वि’स्फोट, दिदीभाइ घा’इते, कस्तो छ अहिले त्यहाँ को अवस्था ?
गण्डकी प्रदेशका सांसद र पिएलाई ५० लाख बढी दशैं भत्ता बाडिदैं !